Puntland oo ciidamo tira badan geystay magaalada Bandhan ee G/Sanaag | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Puntland oo ciidamo tira badan geystay magaalada Bandhan ee G/Sanaag
Sanaag (Halqaran.com) – Puntland ayaa Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa daraawiishta waxaa ay geysay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay dhaq-dhaqaaqyo ka wadeen Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland.
Saraakiisha sar sare ee laamaha amniga Puntland ayaa Shaqa joojin waxaa ay ku sameeyeen Ciidamada Booliska ee ka howlgalayay magaalada Badhan, iyaga oo geeyay Ciidamo kale oo ah kuwa daraawiishta Puntland.
Sidoo kale, saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland ayaa Ciidamada ku amray iay howlgallo dhanka amniga ka sameeyey gudaha Magaalada Badhan oo malmihii la soo dhaafay laga dareemayay amni darro.
Saraakiisha ayaa lagu amray inay ka hortagaan Somaliland oo dooneysa inay galaangal siyaasadeed ku yeelato Magaalada, isla markaana ay ka bilaawdo cod-bixinta doorashooyinka Somaliland
Ciidamada daraawiishta Puntland ee la geeyay Magalada Bandhan ayaa waxaa la faray inay si adag ula dagaallaman dadka ka ganacsada maandooriyaha, gaar ahaanna Khamriga kuwaas oo mudooyinkii dambe ku soo badanayay magaalada .
Ugu dambeyn, magaalada Badhan iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxaa sanadihii la soo dhaafay ku mursanaa Puntland iyo Somaliland, iyadoo Puntand ay dooneyso inay ka hortagto qorsho ay Somaliland ku dooneyso inay uga bilaawdo cod-bixinta doorashooyinka.
Puntland ciidamo farabadan